Professional Hot Ree Cheap Bonnell Spring matarasị N'ihi Africa emepụta
Nweta ozi! chọta nkọwa gbasara Hot Ree Cheap Bonnell Spring matarasị N'ihi Africa, Bonnell mmiri usoro matarasị, damask bonnell matarasị, Bonnell Spring matarasị
Rayson na Rayson Industrial Mpaghara, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Mpaghara, Guangdong, China. Main ngwaahịa Ọkachamara Hot Ree Cheap Bonnell Spring matarasị N'ihi Africa emepụta
Ejiri njirimara ya site na mgbanwe ya ka mma. Ọ nwere ike ịkwado ọtụtụ ntụziaka iji mezue ụdị ọrụ dị iche iche dị iche iche.
Ndị ahịa chọrọ ịmatakwu banyere ngwaahịa ọhụrụ anyị ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị, kpọtụrụ anyị. Anyị na-ekwe nkwa na e zigara ndị ahịa ngwaahịa ahụ nchekwa na ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ịchọrọ ịmatakwu banyere ， kpọọ anyị ozugbo. Mgbe afọ nke mmepe, anyị guzosie ike ogologo oge nkwado mmekọrịta anyị na ndị ahịa n'ụwa nile. Biko nwee obi ike na anyị nwere ikike ịbupụ ngwaahịa anyị na ọ nweghị mmebi dakwasịrị ngwaahịa enyere. Anyị ji obi anyị na-anabata gị ase ma na-akpọ.
Kedu usoro ịkwụ ụgwọ ị na-anabata? LC na anya / site na TT, 30% Deposi na 70% nguzogide megidere akwụkwọ mbupu akwụkwọ bụ ndị arụ ọrụ ụbọchị asaa 7. 1.Dinye katoonu n’elu larịị dị n’ime ụlọ ihi ụra gị, jiri nwayọ wepụ matarasị ma dina n’elu ihe ndina gị. Kpachapụ anya bekee mpụga akpa na mkpa iji jide n'aka na ọ bụghị bee plastic ọjọọ n'ime ma ọ bụ matarasị, adịghị kpọpụ a mma. 3.Rụfee ihe mgbochi a na-ekpuchi ekpuchi na akwa gị 4. Jiri nlezianya belata akpa rọba tinyere nche ka akwa ahụ na-amalite ịmalite ngwa ngwa, Wepu akpa rọba. 5.Nye 24 awa ka akwa nkpuchi ọhụrụ gị iji gbasaa n'ụzọ zuru ezu. Enwere m ike ịga na ụlọ ọrụ mmepụta ihe gị? Ee, ịnabata ileta ụlọ ọrụ anyị n'oge ọ bụla, anyị nọ nso ọdụ ụgbọ elu mba Guangzhou Baiyun, ọ na-ewe naanị otu awa n'ụgbọ ala, anyị nwekwara ike ịhazi ụgbọ ala iji bulie gị.